ESI GBANWEE MBA NA GOOGLE PLAY - GWUO AHIA - 2019
Gbanwee mba na Google Play
Mozilla Firefox dị nnọọ iche na ihe nchọgharị weebụ ndị ọzọ na-ewu ewu na ya nwere ọkwa dịgasị iche iche, na-enye gị ohere ịhazi nkọwa kacha nta. Karịsịa, iji Firefpx, onye ọrụ ga-enwe ike ịhazi onye nnọchiteanya ahụ, nke, n'eziokwu, a ga-atụle ya n'isiokwu.
Dịka iwu, onye ọrụ kwesịrị ịhazi ihe nkesa proxy na Mozilla Firefox ọ bụrụ na e nwere mkpa maka ọrụ a na-amaghị aha na Ịntanetị. Taa, ị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ ntanetị a na-akwụ ụgwọ na ndị free, ma na-atụle na data gị niile ga-ebute site na ha, ị kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-ahọrọ ihe nnọchiteanya nke proxy.
Ọ bụrụ na i nweela data sitere na ihe nkesa nke a pụrụ ịdabere na ya - ọ dị mma, ma ọ bụrụ na i kpebeghị na sava ahụ, njikọ a na-enye ndepụta free nke sava.
Esi melite proxy na Mozilla Firefox?
1. Nke mbụ, tupu anyị amalite ijikọ na nkesa proxy, anyị kwesịrị idozi ezigbo adreesị IP, nke mere na mgbe ejikọsịrị na ihe nkesa proxy anyị ga-ahụ na adreesị IP ahụ gbanwere. Ị nwere ike ịlele adreesị IP gị site na njikọ a.
2. Ugbu a, ọ dị ezigbo mkpa iji kpochapụ kuki ndị na-echekwa data ikike na saịtị ndị ị na-abanyeworị na Mozilla Firefox. Ebe ọ bụ na onye ọrụ proxy ahụ ga-enweta data a, ị nwere ike ịnwe data gị ma ọ bụrụ na onye nchịkọta ihe nnọchiteanya ahụ na-anakọta ozi site na ndị ọrụ ejikọrọ.
Esi kpochapụ kuki na nchọgharị Mozilla Firefox
3. Ugbu a, ka anyị gaa n'ihu usoro nhazi usoro proxy n'onwe ya. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ihe nchọgharị ma gaa ngalaba. "Ntọala".
4. Na njikwa aka ekpe, gaa na taabụ "Mgbakwunye"wee mepee akụkụ ahụ "Network". Na ngalaba "Njikọ" pịa bọtịnụ "Hazie".
5. Na windo nke mepee, tuo igbe "Ntuziaka ihe nnọchiteanya proxy".
Usoro ọzọ nke ntọala ahụ ga-adị iche dabere na ụdị ụdị ihe nnọchiteanya nke ị ga-eji.
Proxy HTTP. N'okwu a, ị ga-ezipụta adreesị IP na ọdụ ụgbọ mmiri iji jikọọ na ihe nkesa proxy. Iji mee ka Mozilla Firefox jikọọ na proxy ahụ kwuru kpọmkwem, pịa bọtịnụ "OK".
Proxy HTTPS. Na nke a, ị ga-achọ itinye adreesị IP na ọdụ ụgbọ mmiri iji jikọọ na ngalaba proxy SSL. Zọpụta mgbanwe.
SOCKS4 proxy. Mgbe ị na-eji ụdị njikọ a, ị ga-abanye adreesị IP na ọdụ ụgbọ mmiri maka njikọ dị nso na "SOCKS node", na dị n'okpuru, họrọ "SOCKS4" nhọrọ na akara. Zọpụta mgbanwe.
Nnọchiteanya SOCKS5. Jiri ụdị nnọchiteanya a, dị ka ọ dị na mbụ, jupụta igbe dị n'akụkụ "SOCKS Node", ma n'oge a, anyị na-ede ihe "SOCKS5" akara. Zọpụta mgbanwe.
Site na oge a na, gị proxy ga-arụ ọrụ na gị Mozilla Firefox nchọgharị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlaghachi ezigbo adreesị IP gị, ị ga-achọ imepe windo ntọala ọzọ ma lelee igbe ahụ "Enweghị onye nnọchiteanya".
N'iji ihe nnọchiteanya nke proxy, echefula na ihe ndekọ gị na okwuntughe gị ga-esi na ha gafee, nke pụtara na ọ bụ ohere mgbe niile na data gị ga-adaba n'aka ndị omempụ. Ma ọ bụghị ya, onye nnọchiteanya proxy bụ ụzọ dị ukwuu iji chekwaa ahaghị aha, na-ahapụ gị ka ị gaa na ebe ọ bụla nwere ike igbochi weebụ.